ကျနော်တို့ WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်အရေအတွက်ကိုလေ့လာသင်ယူ
WebMoney စနစ်အသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးအဘို့အမျိုးစုံပိုက်ဆံအိတ်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ created အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းတစ်လုပ်ရတဲ့နှင့်အရာမှထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ရပါမည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ WebMoney WebMoney အများအပြားဗားရှင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော interface ကိုရှိပါတယ်ပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်ထွက်ရှာပါ။
WebMoney အဆိုပါ CIS နိုင်ငံများတွင်လူကြိုက်အများဆုံးအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိတယ်လို့ယူဆနှင့် (မျိုးစုံကိုငွေကြေးအတွက်) တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောပိုက်ဆံအိတ်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့အဲဒီပိုက်ဆံအိတ်၏အကူအညီနှင့်တစ်ဦးတွက်ချက်မှုလည်းမရှိ။ WebMoney သင်အိမ်ပြန်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ utilities နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်, အင်တာနက်ပေါ်မှာဝယ်ယူမှုများအတွက်ဆပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
WebMoney - ရှုပ်ထွေးပြီးအနုစိတ်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် WebMoney မှအပေါ် log ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ သင်စနစ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်လျှင်, မေးခှနျးကို ပို. ပင်မရေနှင့်မရှင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို system ကို WebMoney တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဆန္ဒရှိဖို့သုံးလက်ရှိရရှိနိုင် entry ကိုလမ်းကိုစဉ်းစားကြပါစို့။
ကျနော်တို့ကတရားဝင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်မှတ် Webmoney ရယူ
WebMoney နှင့်အတူအားလုံးအခြေခံလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်စေရန်, သငျသညျတရားဝင်လက်မှတ်ကိုရှိရမည်။ ဒါဟာပိုက်ဆံအိတ်, display ကိုဖန်တီးရန်ပုံငွေများထုတ်လွှင့်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ပို. ပင် features တွေရဖို့, သင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်မှတ်ကိုရှိရမည်။ အရာအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းစွာနှင့်အလျင်အမြန်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
Sberbank ကဒ် WebMoney ထံမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း
ရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများအ WebMoney Sberbank နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒုတိယကဒ်ကိုပထမဦးဆုံး system ထဲကနေရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းအချို့အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းဖို့ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင် Sberbank ကဒ် WebMoney ထံမှငွေလွှဲခြင်း, ငွေပေးချေမှုစနစ်အားအပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
WebMoney ဖို့ Yandex.Money ထံမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်း
ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များအကြားသယံဇာတအရင်းအမြစ်မျှဝေခြင်းမကြာခဏပင်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအခြေအနေသည် Yandex ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေ WebMoney ဖို့ဘာသာပြန်ချက်တွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုစနစ်များအကြားမျှဝေ၏ WebMoney လမ်းဖို့ Yandex.Money ထံမှရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းတာမရှိ, အဓိကသူတွေကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
အားလုံး WebMoney အကောင့် Remove
အချို့ကိစ္စများတွင်စနစ် WebMoney အသုံးပြုသူများသည်သင့်အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး WebMoney အသုံးမသည်အဘယ်မှာရှိအခြားနိုင်ငံသွားလျှင်ဒီဥပမာ, လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကုသမှုအားဖွငျ့နှင့်အတည်ပြုရေးစင်တာသို့သွားရောက်: မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသင့် WMID ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
WebMoney မှာ Webmoney ထံမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်း
WebMoney နှင့်အများဆုံးရှုပ်ထွေးစနစ်များတဦးတည်းစဉ်းစားသည်ဖြစ်သော်လည်း, တယောက်ကိုတယောက်အကောင့်မှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းရိုးရှင်းစွာဖျော်ဖြေနေသည်။ ဒါဟာ WebMoney စနစ်အကောင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်ပရိုဂရမ် WebMoney ဂိုးသမားသုံးစွဲဖို့နိုင်တော့မည်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပါပဲ။ ဒါဟာသုံးဗားရှင်းအတွက်တည်ရှိ: သင်၏ဖုန်းကို / တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုသည်။
ခြစ်ရာကနေ WebMoney အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
WebMoney အီလက်ထရောနစ်ငွေနှင့်အလုပ်လုပ်သောလူကြိုက်အများဆုံးစနစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အများစုကအလွတ်များနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များရန်ပုံငွေများတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ရယူဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, WebMoney တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဖန်တီးလွယ်ကူပါတယ်။ ထိုမှတပါး, WebMoney အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းလည်းမရှိ။
ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှုများနှင့် WebMoney Qiwi နှိုင်းယှဉ်ရန်
အသစ်တစ်ခုက e-ပိုက်ဆံအိတ်အသုံးပြုသူဖန်တီးသောအခါညာဘက်ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် WebMoney Qiwi နှင့်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်ငွေနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် WebMoney Qiwi ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှု - Qiwi, ရုရှားအတွက် created နှင့်၎င်း၏ပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ရိုက်အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့ရှိပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောငွေပေးချေမှုစနစ်များပိုက်ဆံအိတ်အကြားရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမကြာခဏအသုံးပြုသူများအတွက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Yandex အပေါ် WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေဘာသာပြန်ဆိုသည့်အခါဒါဟာအစတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ နည်းလမ်းများစွာအတွက်ငွေပေးချေမှုစနစ်များအကြား Yandex.Money WebMoney လွှဲပြောင်းရန်ပုံငွေမှပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းပါ။ သင်ရုံ WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကနေပိုက်ဆံထုတ်ယူလိုပါကအောက်ပါဆောင်းပါးကိုတွေ့မြင်: နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်: WebMoney system ကို Method ကို 1 ကနေပိုက်ဆံရုပ်သိမ်းပေးရန်: Link အကောင့်ခညျြနှောငျမှအမျိုးမျိုးသောစနစ်များကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်အကြားရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းကျင်းပရန်အလွယ်ကူဆုံးအကောင့်။
WebMoney သငျသညျကို virtual ငွေနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဝယ်ယူမှုများအတွက်ပေးဆောင်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တက်ဖြည့်ပါနှင့်သင့်အကောင့်မှသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်: ဒေသခံငွေကြေး WebMoney အတူသင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကိုသင်ပိုက်ဆံအကောင့်မှသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ကဲ့သို့တူညီသောနည်းလမ်းများဆုတ်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအမှုအရာတို့ကို။
WebMoney အကောင့် Replenish
WebMoney ပိုက်ဆံအိတ် replenish ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဒီအခရက်ဒစ်ကဒ်, စတိုးဆိုင်များတွင်အထူးဆိပ်ကမ်း, ဆဲလ်ဖုန်းဥပဒေကြမ်းများနှင့်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကကော်မရှင်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရက်တွင်ရွေးချယ်ထားသောနည်းလမ်းပေါ် မူတည်. အလွန်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။